प्लास्टिकमा ल’पेटेर मोटरसाइकल ल`ग्दै गरेको र’हस्य खुल्दा दुनियाँ कै हृ`दय रसायो ! – Khabaarpati
October 24, 2020 goodmamLeaveaComment on प्लास्टिकमा ल’पेटेर मोटरसाइकल ल`ग्दै गरेको र’हस्य खुल्दा दुनियाँ कै हृ`दय रसायो !
काठमाडौं । उपचारमा क्रममा सन्तान गु’माएका आमाबाबुले अस्पताल बाट एम्बुलेन्स स`मेत पाएनन् । यो अमानवीय घ’टनाले अहिले दुनियाँ`कै ह्द`य र’साएको छ । भारत, छत्ती सगढ राज्यमा को`रोना सं`क्रमणको कारण ब`न्द भएको बेलामा अस्पताल व्यवस्थापनले देखाएको यस्तो हर्कतले सबैलाई ल’ज्जित बनाएको छ ।
जान्जिगीरमा दुई वर्षीया बालिकालाई स’र्पले क्ष’ति गरायो । छोरीलाई स’र्पले क्ष’ति गराएपछि आ`माबाबु जिल्ला अस्पतालमा पुगे तर छोरीलाई बचाउन सफल भएनन् । अस्पतालले लाश आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्‍यो, तर बो`क्नको लागि एम्बु`लेन्स प्रदान गरेनन् । उनीहरुसँग अरु अस्पताल`सँग एम्बुलेन्स झि’काउने रकमपनि बाँकी थिएन । यस पछि, परिवारले प्लास्टिकमा ला’श ल’पेट्यो र मोटरसाइकलबाट बोकेर आफ्नो घरतर्फ लाग्यो ।
जिल्ला सदरमुकामबाट अलि टाढा रहेको गाउँ बनारीको सब`रिया डेरा निवासी गोपाल प्रसाद गोंड आफ्नी २ वर्षीया छोरी शीतल गोंड़सँग शुक्रबार खेलिरहेका थिए । यसै बीच स’र्पले उनकी छोरीलाई क्ष’ति गरायो । जब परिवारलाई थाहा भयो, उनीह`रुले पहिला झारफुक गरेका थिए, तर उनको स्वास्थ्य बि’ग्रन थालेपछि तत्काल जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो ।
त्यहाँ उपचार सुरु हुनुभन्दा अघि शरीरमा सर्प –वि–ष– फैलिसकेका कारण ती बालि`काको नि`धन भयो ।बालिकाको लाश परीक्षण पछि अस्पताल प्रशासनले उनको ला’श आमाबाबुलाई हस्तान्तरण गर्यो । ला’श लिन परिवारले लामो समय सम्म गाडीको खोजी गरिरहेको थियो, तर लकडाउनका कारण फेला पार्न सकेनन् ।
गोपालले भने कि उनले अस्पतालसँग गाडीको पनि माग गरेका थिए तर दिइएन । यस पछि, मृ त शरीर पलास्टिकमा बेरेर बाइ`कमा घर लगेर गएका हुन् । जनबोली बाट
सा ढे दुई महिनामा ७६ बा ल बा लिका उ द्धार गर्ने प्रहरी अ धिकृत सीमाको स र्वत्र च र्चा
November 20, 2020 Khabar Pati